မင်္ဂလာအပေါင်းခညောင်းတဲ့နေ့ .. ပျော်ရွှင်မှုတွေ ကူးစက်တဲ့နေ့ 
: at 1/13/2012 09:37:00 PM
ပူဇော်ထိုက်သူကို ပူဇော်ခြင်းဟာ မင်္ဂလာတပါး လို့ အဆို ရှိတဲ့ အထဲမှာ ပြုသင့် ပြုထိုက်တဲ့ အမှုကို ပြုခြင်း (လွှတ်ပေးထိုက်သူကို လွှတ်ပေးခြင်း ) ဟာ လည်း မင်္ဂလာတပါးလို့ဆိုရရင် လွန်မယ်မထင်ပါ ။ မနေ့ ညနေကတည်းက ကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းကောင်း အတွက် ကိုယ့်မျက်စိ ကိုယ့်နားကို ဘယ်လိုမှ မယုံနိုင်သေး ။ အညာခံနေကြရတာ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆိုတော့လည်း ပြောတိုင်း ကြားတိုင်း မယုံရဲတာ မယုံချင်တာ မယုံနိုင်တာ အရိုးစွဲနေပြီမို့ရွှေပြည်သားအပေါင်းတို့ မှာ ယုံရနိုးနိုးဖြစ်နေခဲ့ကြမယ်လို့ တထစ်ချပြောရဲပါတယ် ။
ပြောရဲ ဆို ၊ အရင်အခါတွေတုံးက အတွေ့ အကြုံတွေ အရ သိနေကြတာကိုး ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး နေ့ ရွှေ့ညရွှေ့ ၊ ပြီးတော့လည်း မစို့ မပို့ နဲ့ မဟုတ်တရုတ် တွေပဲ ထွက်ထွက်လာကြတာဆိုတော့ မယုံကြည်ရဲသူတွေကိုလည်း အပြစ်ပြောလို့ မရပေဘူး ။ဒီလိုနဲ့ ဟုတ်မှဟုတ်ပါ့မလား၊ အဓိက သူရဲကောင်းတွေ ပါမှပါပါ့မလား၊ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ် သံသယစိတ်တွေနဲ့ ကွန်ပြူတာရှေ့တညနေလုံး ထိုင်ပြီး ကြား ကြားသမျှ တက်လို့ရသမျှ သတင်းဌာန ဝက်ဆိုက် တွေ ဝင်ကြည့် ဖတ်ကြည့် လုပ်နေရတာ မိုးကြီးချုပ်လို့ချုပ်မှန်းမသိ ၊ သန်းကောင်ကျော် လို့အာရုဏ်တက်ခါနီးထိ ရင်တထိတ်ထိတ် ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်တို့ လို သွေးမတော် သားမစပ် တစိမ်းသက်သက်တွေ အနေနဲ့တောင် ခုလောက်ထိ စိုးတထိတ်ထိတ် နဲ့စောင့်မျှော် နေခဲ့ကြတာ ဆိုတော့ တကယ့်သွေးသားရင်း မိဘမောင်နှစ်မဆွေမျိုးများဆိုရင် ဘယ်လောက်ထိ စိုးထိတ် ဝမ်းသာနေကြမလည်း ဆိုတာ တွေးကြည့်လို့ ရပါတယ်။
အိုင်တီခေတ်ကြီးမှာ လူလာဖြစ်ရတာ ကံကောင်းတယ်ပဲ ဆိုရမလား ၊ အင်တာနက် သတင်းဌာနတွေ၊ မျက်နှာစာအုပ်မှ သတင်းတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးထဲညီ အလွယ်တကူ ကြားသိဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ၊ အမိမြေမှ တိုင်းရင်းသား ညီအကို မောင်နှစ်မတွေ အားလုံးလည်း ခုလိုပဲ တန်းတူအခွင့်အရေးတွေ ရနိုင်ပြီး ကမ္ဘာကြီးပေါ်က ဖြစ်ပျက်မှု သတင်းပေါင်းစုံကို အလျှင်မြန်ဆုံး ရနိုင်ကြဖို့ သိနိုင်ကြဖို့ စိတ်ဆန္ဒတခုပေါ်လာမိသေးတယ် ။ အရေးကြီးတဲ့ သတင်း အတော်များများကို ဟိုးအဝေးကြီးက လူတွေ က ဦးစွာသိနေရတဲ့ အဖြစ်ကနေပြီး အားလုံး တပြိုင်နက်ထဲ သိနိုင်ကြဖို့ မျှော်လင့်မိတယ် ။ ထားလိုက်ပါတော့ ၊ ဒီအခြေအနေမျိုး မကြာခင်မှာ ဖြစ်လာတော့ မယ်ဆိုတာလည်း ယုံကြည်တယ် ။
ဒီလိုနဲ့ တမိုးချုပ်ပြီး အာရုံဦး အလင်းသစ်နဲ့ နေ့သစ်ရောက် ခဲ့ရပါပြီ ။ ယနေ့၂၀၁၂ခုနှစ် ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့( သောကြာနေ့ ) ။ ရာစုနှစ်တဝက်မျှ အမှောင်လွှမ်းနေခဲ့ရတဲ့ အချိန်များ ကို ကျော်လွှားလို့ လာခဲ့ပါပြီ ။ အမှောင်ထုတွေထဲမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ဘဝ နဲ့ အသက်များကို ပေးဆပ်ပြီး အနစ်နာခံ ခဲ့ရတဲ့ မြန်မာ့ သူရဲကောင်း ကြီးများ၊ ယုံကြည်မှု ကို အပွန်းမခံ အလံမလှဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရပ်တည် ခဲ့ကြသူများ အားလုံးနီးပါးတို့ဟာ ယနေ့မင်္ဂလာ ရှိတဲ့ ရက်မြတ်မှာ လွတ်လပ်ခွင့် ရခဲ့ပါပြီ ။
သတင်းတွေကလည်း စက္ကန့်ပိုင်းနဲ့ မခြား အပြိုင်အဆိုင် တက်လာလိုက်ကြတာလေ။ အသံဖိုင်တွေကလည်း တခုပြီး တခု အဆက်မပြတ်ပါပဲ ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကွဲကွာနေကြတဲ့ သွေးချင်းများကို ဝမ်းသာအယ်လည်း ဖက်ပြီး ငိုနေကြ ၊ ပြုံးရယ်နေကြတဲ့ ပုံပေါင်းများစွာ ပလူကိုပျံလို့ ။
ကို မင်းကိုနိုင် လွတ်ပြီတဲ့ ..ဦးခွန်ထွန်းဦး လွတ်ပြီတဲ့ ၊ကိုဌေးကြွယ် လွတ်ပြီတဲ့၊ ကိုမြအေး လွတ်ပြီတဲ့၊ ကိုကိုကြီး လွတ်ပြီတဲ့ ၊ ကိုဂျင်မီ ၊ မနီလာသိန်း လွတ်ပြီတဲ့ ၊ အရှင် ဂန္ဘီရ လွတ်ပြီတဲ့ ၊ဘလော့ဂါ ကို နေဘုန်းလတ်၊ဂီတပညာရှင် ကိုဝင်းမော် လွတ်ပြီတဲ့၊ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဦးဝိစိတ္တ လွတ်ပြီတဲ့... လွတ်ပြီတဲ့ ....လွတ်ပြီတဲ့ ..လွတ်ပြီတဲ့ ..တချို့ပြောတာကတော့ . ၂၀၀ ကျော် . တချို့ကပြောတာ ၃၀၀ ကျော်..လွတ်လာပြီတဲ့..
ဖေါက်ခွဲရေး အမှုနဲ့ခေါင်းစဉ်တပ်ခံထားရသူ တချို့ ကလွဲရင် အားလုံး လွတ်လာကြပြီတဲ့..။
ဒီကြားထဲ ဆွမ်းဆန်စိမ်း ဆွမ်းကြီးလောင်းတဲ့ အထဲ ဘလာဗလာ ဘလာ.. ကြွက်ချေး အနည်းငယ်ပါလာသေးသတဲ့ ။ ထားလိုက်ပါတော့ ၊ အနှစ်နှစ်အလလက မျှော်လင့်တောင်းတနေကြတဲ့ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာတွေ ဖြစ်လာရတာကို ပဲဝမ်းသာလှပါပြီ။ ဒါကြောင့်မို့ဖဘ ကြီးပေါ်မှာ တွေ့ တွေ့ သမျှ သူငယ်ချင်းတွေကို နှုတ်ဆက်နေမိတယ် ။ မြင်မြင်သမျှ သက်ဆိုင်ရာ သတင်းတွေ စတေးတပ်တွေကို Like လုပ်နေဖြစ်တယ် ။သူငယ်ချင်းဟုတ်သူတွေရော မဟုတ်သေးသူတွေရော အပြန်အလှန်နှုတ်ဆက် စကားတွေ ပြောနေကြတာမြင်လိုက်ရတယ်။ အပျော်တွေ အပျော်တွေ ကူးစက်နေလိုက်ကြတာ ခုချိန်မှာ ကမ္ဘာ့ အပျော်ဆုံးလူသားများကို စစ်တမ်းကောက်ရင် ရာနှုန်းပြည့် သေချာတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
တခါမှ ဒီနေ့ လောက်ထိ ကွန်ပြူတာနဲ့ မျက်စိ နဲ့ မခွာပဲ အကြာကြီး မနေခဲ့ဖူးဘူး ။ မျက်လုံးတွေ ကျိန်းစပ်နေပေမဲ့ တရစပ်တက်နေတဲ့ သတင်းတွေ လွတ်သွား မှာစိုးလို့မျက်စိပျက်လည်း ပျက်ပါစေတော့လို့ အားခဲပြီး ကြည့်နေမိတယ် ။ သူတို့ တတွေ ဘဝပျက်ခံ ကျန်းမာရေးပျက်ခံပြီး ထောင်ထဲမှာ နှစ်ရှည်လများ နေခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခလောက်မှ ကိုယ့်အဖြစ်က မဆိုးလှဘူးမဟုတ်လား။ ရင်ထဲတစ်ဆို့ဆို့ နဲ့ ၊ မျက်ရည်ပူတွေ ပါးနှစ်ဖက်ပေါ်စီးကျလာတော့မှ ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ် ပြန်သတိရမိတယ် ။သေချာတယ်၊ ဝမ်းသာလို့ ကျလာတဲ့မျက်ရည်များပါပဲ ။
အဲဒီမျက်ရည်များကို ဖန်တီးရှင် က ဘယ်သူပါလည်း ၊ ဗေဒင်မေးစရာ မလိုပါဘူး၊ အားလုံးအသိ ၊ အဓိက အခရာ ကြီး ကတော့ ကိုယ်တို့ ရဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး မှ လွဲရင် ဘယ်သူများ ဖြစ်နိုင်ပါအုံးမလည်း ။ဒီတော့ သူ့ နေရာမှာ သူ့ ကိုယ်စား ဝင်ပြီး ခံစားကြည့်မိတယ် ။ သူလည်းလေ လောကီသားပေမို့အမှားတခုခုကို အရင်က လုပ်ဖူးကောင်း လုပ်ဖူးခဲ့ပါလိမ့်မယ် ။ အရင်က စံစားနေရတဲ့ အပျော်တွေထက် ခု ပြတ်ပြတ်သားသား ပြုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ကောင်းမှု အတွက် သူလည်း ပျော်နေပါလိမ့်မယ် ။ သူ အရင်က ဘယ်ပုံဘယ်နည်း ရှိခဲ့ပေမဲ့ ခုချိန်မှာတော့ အကြင်နာ တရား ပြည့်ဝ လာသူပေပဲ ။ ပြည်သူ့ အသံကို နားထောင်ပြီး လိုက်လျောပေးတတ်သူပေပဲ ။ ဆုံးဖြတ်ရခက်နေတဲ့ အရာတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အမှန်တရားကို ဖေါ်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့သူပေပဲ ။ အရင်က အမြင်မကြည်လင်ခဲ့ မယုံရဲခဲ့ပေမဲ့ ခုတော့ မျက်ရည်များကြားထဲကနေပဲ အမြင်ကြည်လင်သွားရပါပြီ ။ ဒီတော့ ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သမ္မတကြီး ကျန်းမာရွှင်လန်းစွာဖြင့် သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ ။သန့်ရှင်းတဲ့ သမ္မတကြီးအဖြစ် တည်တံ့နေနိုင်ပါစေ ။နောင်ကိုလည်း မြန်မာပြည်ကြီးသာယာဝပြောရေး အတွက် စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါစေ ။ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူတကွနေထိုင်နိုင်စေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား အပေါင်းတို့အား အိပ်နိုးချမ်းသာ အဖြာဖြာကို မျှတခံစားနေနိုင်ကြစေရန် ဦးဆောင် လမ်းပြ ပေးနိုင်ပါစေ ။
လွတ်မြောက်လာကြသော သူရဲကောင်းများအနေနဲ့လည်း အမိမြန်မာပြည်ကြီး တိုးတက်ကြောင်းအတွက် အစွမ်းရှိသမျှ ဆထက်တပိုးတိုးပြီး ဝန်းရံနိုင်ကြပါစေ ။ လားရာတူသော အရွေ့ များနဲ့ တညီတညွတ်တည်း ရှိနေနိုင်ကြပါစေ။
နာဆာကတွက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ၊ ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက် မှာ နီဘီရု ဂြိုလ်ကြီးနဲ့တိုက်ပြီး ပျက်မယ်ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာကြီးလည်း ဆက်လက်တည်တံ့နိုင်ပါစေ..။ဒါပေမဲ့ ယုံကြည်နေတယ် ။ ကမ္ဘာကြီး လုံးဝ မပျက်စီးနိုင်ပါဘူး ။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မြန်မာပြည်ကြီးက ခုမှ စပြီး တည်ထောင်ရအုံးမှာ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကြီးက ဝင့်ကြွားထယ်ဝါရအုံးမှာမို့ပါပဲ ။
ဒီဓါတ်ပုံလေးကို မနဒ္ဒာရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဒီနေရာမှ ရယူပါတယ် ။
ရက်စွဲ ကွက်လပ်ကလေး ဖြည့်ပေးပြီးသွားတော့ မင်္ဂလာ အပေါင်းနဲ့ ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့ ။
:kiki : at 1/13/2012 09:37:00 PM
Shinlay said... | Friday, January 13, 2012 10:24:00 PM
ဟုတ်တယ်ကိရေ။ ကျမလည်း အလုပ်ထဲမှာ ရှိနေတုန်း
ဒီနေ့တနေ့ လုံးကျမပျော်နေပါတယ်။
Crystal said... | Friday, January 13, 2012 10:31:00 PM
ကိုကိုဂိန် လာထား....အာဘွားးးးး)
SHWE ZIN U said... | Friday, January 13, 2012 10:47:00 PM
ကိ နော် အပြောင်းအလဲ အတော်မြန်
ဒီကလည်း လာထား အာဘွားပါဘဲ
သမ္မတကြီး ကျန်းမာချမ်းသာ ပါစေ
မြစ်ကျိုးအင်း said... | Friday, January 13, 2012 10:54:00 PM
“ခုချိန်မှာ ကမ္ဘာ့ အပျော်ဆုံးလူသားများကို စစ်တမ်းကောက်ရင်ရာနှုန်းပြည့် သေချာတယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။”
aungmyooo said... | Friday, January 13, 2012 11:18:00 PM
အာဘွားက ဘယ်သူ့ ကိုပေးတာလဲ သမမတကြီးဦးသန်းစိန်ကိုလား
Anonymous said... | Friday, January 13, 2012 11:48:00 PM
နှင်းနိုင် said... | Saturday, January 14, 2012 12:09:00 AM
မြစ်ဆုံကိစ္စနဲ့ နိုင်ကျဉ်းလွှတ်ပေးတဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ပြတ်သား လျင်မြန်တာတွေကြောင့်.... အလွန်လေးစားသွားပါပြီ.... သူက ပြည်သူကအသံ နားထောင်တဲ့ သမ္မတတဦးဆိုတာ သေချာသွားပါပြီ.... သမ္မတကြီး အပါအဝင် ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ အုပ်ချုပ်သူများ သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) said... | Saturday, January 14, 2012 1:52:00 PM
မကီရဲ့ ပုံထဲမှာ သမ္မတကြီးက မိန့်မိန့်ကြီးပြုံးလို့နော်။း)
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လူတွေစိတ်ချမ်းသာအောင် ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးရင် သူကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီမေတ္တာဓာတ်နဲ မေတ္တာရဲ့ တုံ့ပြန်ခြင်းကို ခံကြရမှာပါ
ခုလို လူတိုင်းက သူ့ကို သမ္မတကြီးလို့ လေးလေးစားစား ခေါ်နေကြပြီ မဟုတ်လား။
သူ့လို လေးစားစရာမကောင်းတဲ့သူတွေကိုတော့ ဘယ်သူက ဒီလို ခေါ်ကြလို့လဲနော်။း)
mstint said... | Saturday, January 14, 2012 2:52:00 PM
မြန်မာဟာ ကမ္ဘာမှာ ထယ်ဝါဝံ့ကြွားနိုင်တဲ့ နိုင်ငံအဖြစ်
ahphyulay said... | Saturday, January 14, 2012 6:41:00 PM
ကိုမင်းကိုနိုင်တို့NLD ရုံးမှာ ပုံစံခွက်နဲ့ ပဲ
ကောက်ညှင်းပေါင်းစားနေတဲ့ ပုံ မြင်လိုက်
ရတော့ရင်ထဲ စို့ခဲ့ ရပါတယ်။
စာနာကြည့် လို့ မရနိုင်တော့ တဲ့ 
သူတို့ ရဲ့  စွန့် လွှတ်စီန့် စားမှုတွေပါပဲ။
သက်တန်းလည်း၅၀တွေရောက်ခဲ့ ရပြီတဲ့ ။
ဘာပဲပြောပြော မမကီ ချစ်စနိုးနဲ့နောက်
ခေါ်နေတဲ့ပြောင်ကြီး အဲ.. သမ္မတကြီးကို
seesein said... | Sunday, January 15, 2012 8:14:00 PM
...အလင်းစက်များ said... | Wednesday, January 18, 2012 2:11:00 PM
ခုမှ ခြေလှမ်းစတာဟာကို ကမ္ဘာကြီး မပျက်ပါနဲ့ အုန်းလား။ :D
ဟန်ချက်ညီညီ အတွဲညီညီ ..
မင်္ဂလာအပေါင်းခညောင်းတဲ့နေ့ .. ပျော်ရွှင်မှုတွေ ကူးစက...